Ngabe ubhubhane seluphenduke kanjani i-wok epaki yomsunguli weCamile Thai uBrody Sweeney | Franchiseek
Ubhubhane seluphenduke kanjani u-wok epaki lomsunguli weCamile Thai uBrody Sweeney
»Ubhubhane seluphenduke kanjani u-wok epaki lomsunguli weCamile Thai uBrody Sweeney
UBrody Sweeney, umphathi kaCamile Thai, uzizwa enenhlanhla - futhi enecala. Umthelela weCovid-19, odonsa amabhizinisi amaningi okudla e-Ireland, awubhalisi nezehlakalo kwisethi yakhe yokudla.
Ngemuva kokuqhuma isikhashana ngoMashi, ibhizinisi lihweba ngaphambi konyaka owedlule. Ukuthengisa okufana nokwakho e-Ireland kukhuphuke ngo-6% engxenyeni yokuqala ka-2020. Ukuthengisa eLondon, ekhaya ukuya ezindaweni ezinhlanu zikaCamile, kukhule ngama-35% ngasikhathi sinye, yize kusuka endaweni ephansi.
Ibhizinisi lilindele ukuguqula ngaphezulu kwe- € 30m kulo nyaka kuzo zonke izitolo zalo ezingama-33, iningi lazo ezisetshenziswa ama-franchisees.
USweeney, obambe iqhaza kwiSave Our Restaurants Coalition ecela uhulumeni ukuthi aseseke kuma-reseateurs, uyazi kahle izinhlungu ezabekezelelwa ozakwabo abasebenza nabo embonini yokudla.
Isungulwe ngonyaka ka-2010, uCamile usungule izitolo ezindaweni eziningi ezisezingeni eliphansi futhi wabeka phambili ukulethwa kwezindlu ngaphezulu kokudlela kuwo. Kuyimodeli yebhizinisi efakazelwe ukuthi ingubufakazi bolubhubhane.
"Siliphatha kahle ibhizinisi, kodwa iqiniso lokuthi sikhethe imodeli eyayilethwa emakhaya futhi isemadolobheni, inhlanhla nje leyo," kusho uSweeney.
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule inkampani iye yathuthukisa imodeli yokuguqula amanani aphansi yokuvumela ukuhwebelana kodwa nokudla okukhona endaweni efanele emadolobheni ezifunda ukuhambisa ukulethwa kukaCamile Thai. Eyokuqala yalokhu esanda kuvulwa eSligo futhi yabiza umnikazi we-franchise € 50,000 ngokungafani ne- $ 300,000 edingekayo kwifuranti yeCamile evamile. USweeney ulindele ukuvula izitolo ezinhlanu noma eziyisithupha e-Ireland futhi mhlawumbe nenani elifanayo eLondon.
Ukuxhasa ngezimali izinhlelo zakhe zokukhulisa uCamile, okubalwa ukuthi umsunguli weWeb Summit uPaddy Cosgrave kanye nongxowankulu osamabhizinisi uBrian Caulfield njengabaninimasheya, uhlela ukwethula umjikelezo wemali yangaphandle engu- € 10m ezinyangeni ezimbalwa ezizayo. Imali izosetshenziselwa ukukhulisa ubukhona bayo eLondon ezindaweni ezingama-50. Ngenkathi le nkampani isondela kuyo ukuze isungule eDubai futhi ibheka iMelika, iSweeney igxile enhlokodolobha yase-UK. "Sidinga ukuthi sibambe ongezansi. Sidinga ukwenza iLondon isebenze ngaphambi kokuthi siye kwezinye izindawo, ”kusho yena.
I- € 10m, ezokwengezwa cishe yi- € 6m yokutshala imali kwangaphakathi, nayo izothuthukiswa ekwakheni ubuchwepheshe obusha. Uhlelo lokusebenza lenkampani lokulethwa lwakhiwa ngaphakathi endlini futhi lukhiqiza ngaphezu kwe- € 1m ekuthengiseni ngenyanga, kepha idinga ukuthuthukiswa ukuze ikwazi ukusheshiswa ngokuthandwa kweDeliveroo ne-Just Eat.
UCamile ubheke nokwengeza ama-robotic emgqeni wokukhiqiza. “Uma ucabanga inqubo yokupheka ikhekhe, kuyaphindaphindeka futhi kuyaphindeka,” kusho uSweeney. "Sifuna ukubuyisela abapheki bethu bencwadi abayisebenzisayo inguquko ye-semi-automatic. Inhloso yalokhu ukuthi sinciphise izindleko zethu zabasebenzi futhi sizheshise izinsiza. ”
Bese kuba khona ama-drones. Kwamenyezelwa kulo nyaka ukuthi uCamile uzokwethula ukulethwa kwe-drone nosomabhizinisi uBobby Healy's Drone's Startone Up. Amakhasimende azokwazi ukusebenzisa ubuchwepheshe beGoogle Earth ukusetha indawo yomhlangano lapho izidlo zizokwehla khona ngentambo engahlelekile kusuka kudrone automated ekwazi ukuhamba ngo-80kph.
Lezo zinhlelo, ezidinga ukususwa kumlawuli wezindiza, ziye zaphazanyiswa yilolu bhubhane njengoba iMana yashintshela izinsiza zalo ekubhalisweni okubhaliwe okubhalwe yi-drone ye-HSE.
USweeney ulindele ukuletha isidlo sakhe sokuqala ngomoya ngonyaka olandelayo. Uthi: “Ama-drones awanandaba nalutho ngokubona kwebhizinisi. Izindleko zokulethwa zizonqanyulwa, amakhasimende athola ama-oda awo ngokushesha, bese ibhokisi elisekela uCamile libeka phezulu.
Kuyiqiniso ukusho ukuthi uSweeney unenkinga engcono kakhulu ngalesi sikhathi ngokuqhathaniswa nokuwohloka kwemali kokugcina, lapho ehluleka ukulawula izintambo zebhokisi lamasemishi le-O'Briens ayelisungula ngasekupheleni kweminyaka yama-1980.
“Izinwele ezimpunga zibalulekile,” kusho yena, ephethe ngesandla ngesandla sakhe sesiliva. “Njengoba sikudlule ngokuphelele kuma-shitsville nabakwa-O'Briens, asikuvumelanga lokho futhi. Siphume amabhlogo kusenesikhathi ukuthi sizosabela kanjani kulokhu, kunokuba sivumele izinto zenzeke kithina. ”
Ithuba elihlukile le-Franchise ne-Coffee Blue! Ibhizinisi Lekhofi iBlue yakhelwe kusuka emhlabathini ukuze ibe yiselula ehamba phambili…